Google Play Store apk ကို Support ပေးရုံသာမက Android Oreo version ပါ ပါဝင်တဲ့ Nokia62018 – AsiaApps
Google Play Store apk ကို Support ပေးရုံသာမက Android Oreo version ပါ ပါဝင်တဲ့ Nokia62018
January 11, 2018 January 11, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Google Play Store apk ကို Support ပေးရုံသာမက Android Oreo version ပါ ပါဝင်တဲ့ Nokia62018
Nokia62018 (TA-1054) ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ ဖုန်း အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစထွက်ချင်းတုန်းက Android 7.1 Nougat version နဲ့ပါ။ HMD ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်သာ Nokia62018 မှာ Oreo version ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Google Play Store apk ကို support ပေးတာပါ။
For those asking about it, Nokia62018 (TA-1054) in China does come with optional support for Google services, which means you can download and install Google Play Store APK.
Nokia62018 (TA-1054) အတွက် Google Play Store ကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင် support ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဘက်ကို support ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလည်း support ပေးလောက်မှာပါ။ ဒီကနေ Download ရယူနိုင်ပါပြီ!!! Google Play Store apk ကိုမိမိရဲ့ Nokia62018 မှာတစ်ကြိမ် Download ဆွဲပြီးတာနဲ့ ပြန်ဖျက်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဲ့တာကတော့ သိထားရမယ့်အချက်ပါ။ နောက်ဆုံးထွက် Android Oreo version ဖြစ်တာကြောင့် Feature ခက်လန်းလန်းလေးတွေကတော့ စောင့်ကြိုနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Feature တွေနဲ့ အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Feature လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်ကျရင် တင်ပေးသွားပါ့မယ်။
Official: This is Nokia6(2018) https://t.co/h7bejos0Up pic.twitter.com/KxUlJfsb6C
— NokiaMob (@NokiamobBlog) January 4, 2018
Android, Firmware Updates, Nokia
ကိုယ်တိုင် ကာတွန်း GIF တွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ PicsArt Animator